नयाँ राजानीतिमा खोटाङका माननीय को कताको बैठकमा ? «
नयाँ राजानीतिमा खोटाङका माननीय को कताको बैठकमा ?
प्रकाशित मिति : ७ पुष २०७७, मंगलवार १२:३७
खोटाङ । पुस ७, नेकपाको विवाद तल्लो तहमा पुगेको छ । अहिले अध्यक्ष केपी ओली समुहमा खुल्ने वा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल–माधव नेपाल समुहमा खुल्ने रस्साकस्सी चलिरहेको छ । जिल्ला जिल्लामा समेत दुवै पक्ष आफ्नो टिम बनाउने होमवर्कमा जुटेको देखिन्छ ।
यसै सन्दर्भमा मंगलबार केन्द्रमा अध्यक्ष ओली र प्रचण्ड–नेपाल समुहको छुट्टा–छुट्टै बैठक बोलाएको छ । केन्द्रीय सदस्यहरु आ–आफ्नो लाईनलाई समातेर गुटगत भेलामा दौडिरहेका छन् । तर, खोटाङका प्रदेशसभा सांसद एबं केन्द्रीय सदस्य राजन राईले दुबै बैठकमा नजाने बताएका छन् ।
नेपाल समुहका राईले फेसबुकमार्फत तटस्थ बस्ने उल्लेख गरेका छन् । ‘आज केन्द्रिय कमिटिको बैठक भनिएको कुनै पनि गुट भेलाहरुमा म सहभागी नहुने भएको छु’ राईले फेसबुकमा लेखेका छन् । उसो त राईले आफुनिकट नेता तथा कार्यकर्तालाई अगाडिदेखि नै तटस्थ बस्ने बताउँदै आएका थिए ।
नेकपाका केन्द्रीय सदस्य एबं प्रतिनिधिसभा सदस्य बिशाल भट्टराई ओली समुहको बैठकमा सहभागी भएका छन् । भट्टराई ओली निकट हुन् । यस्तै, प्रचण्डनिकट प्रदेशसभा सांसद एबं केन्द्रिय सदस्य रामकुमार राई (पासाङ) पनि प्रचण्ड–नेपाल समुहको बैठकमा सहभागी हुँदैछन् । पासाङले सामाजिक सञ्जालबाट ओलीको प्रतिक्रान्ती विरुद्ध शक्त लड्नका लागि आव्हान नै गरेका छन् ।
‘केपी ओलीको प्रतिक्रान्ती कदमले खलनायक सावित भयो । प्रतिक्रान्ती विरुद्ध सशक्त लडौं,’ पासाङले लेखेका छन्, ‘वास्तविक सिद्धान्त, बिचारको कम्यूनिष्ट पार्टीमा लागौँ ।’ खोटाङका तीन जना प्रदेशसभा सांसदमध्ये उषाकला राई केन्द्रिय कमिटिमा छैनन् ।